१२ बर्षिय बालक र १३ बर्षिया बालिकाले देहत्याग गर्ने प्रयास गरेपछि….. – Classic Khabar
१२ बर्षिय बालक र १३ बर्षिया बालिकाले देहत्याग गर्ने प्रयास गरेपछि…..
September 6, 2021 37
दुई वर्षयता विश्वभरि फैलिएको कोभिड–१९ का कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। टोलछिमेकका साथीसँग खेल्न र भेट्नसमेतरोक लगाइएको छ। लामो समय घरभित्रै बसेर अनलाइन कक्षामा पढिरहनुपर्ने बाध्यताका कारण बालबालिकामा सामान्यदेखि ग’म्भीर खालका मनोसमस्या बढिरहेको पाइएको छ।
एक साताअघि काठमाडौंकी १३ वर्षीया बालिकाले प’त्तीले हात का’टेर देहत्याग गर्ने प्रयास गरेपछि अभिभावकले उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल पु-याए। देहत्यागको प्रयास गर्नुअघि ती बालिका इन्स्टाग्राम, टिकटक बढी समय गुजार्ने र सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई हेर्न चाहने गर्थिन्। उपचारपछि उनी सामान्य अवस्थामा आइरहेको बाल मा’नसि’क रोग विशेषज्ञ डा. अरूण कुँवरले बताए। यो वर्ष दैनिक १४ देखि २२ जनाले देहत्याग प्रयास गरेको तथ्यांक छ।
काठमाडौंकै १२ वर्षीय बालकले घरबाहिर निस्कन नमान्ने, संक्रमण सर्छ भन्दै अविभावकलाई घरबाहिर निस्कन नदिने, घरीघरी हात धुनेजस्ता गतिविधि गरेपछि उपचारका लागि उनलाई पनि दुई साताअघि कान्ति बाल अस्पतालमा पु¥याइयो। उपचारपछि बालक पनि सामान्य हुँदै गइरहेको डा। कुँवरले बताए।
गत वर्ष काभे्रका १७ वर्षीय युवकले लकडाउनकै अवधिमा देहत्यागको प्रयास गरेका थिए। घरबाट कामकै सिलसिलामा सिन्धुली पुगेका उनी लकडाउनमा उतै फसेपछि आफूलाई दिक्क मान्ने गरेको बताएका थिए। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि उनले देहत्यागको प्रयास गरेका थिए। गाउँलेको सहयोगमा उनको उद्धार भएको थियो।
दोस्रो लकडाउन लामो बनेपछि दोलखाकी एक १७ वर्षीया किशोरीले पढाइरोकिएको चिन्तामा देहत्याग गर्ने सोच आएको थियो। उनमा असामान्य गतिविधि बढ्दै गएपछि अविभावकले मनोविद् कञ्चनरावतकहाँ पुर्याए। उनले बारम्बार पढाइ रोकिएर भविष्य अन्धकारमा गयो भन्ने चिन्ता मात्र पोख्ने गरेकी थिइन्। मा’नसिक रोगको उपचारपछि उनी सामान्य अवस्थामा फर्केको रावतले जानकारी दिइन्।
डा. कुँवरका अनुसार यी दुवै बालबालिका कोभिड–१९र निषेधाज्ञाले घरबाहिर निस्कन नपाउनु, घरबाहिरको खेलकुदमा सहभागी हुन नपाउनुर प्रत्यक्ष अन्तरसंवादबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूमा विभिन्न खालका मनोसमस्या बढेको छ। उनीहरूमा ड’र ला’ग्ने, डि’पे्रस’न हुने, पढ्न मन नगर्ने, ग्या’जेट बढी चलाउने, निद्रा नलाग्ने र अन्य खालका मनोसमस्या बढिरहेको छ।
नेपालमा संक्रमण फैलिएपछि बालबालिका तथा युवा उमेर समूहमा समेत मा’नसिक समस्या बढेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
Prevसलमानले सिद्धार्थको मृत्युलाई लिएर मजाक उडाए पछि ….
Nextएमसिसी पास गर्ने सरकारी तयारीः देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता
मोरंगमा मामा र भान्जी संगेहात रंगेहात समातिए